Dabageed oo beeshiisa ku qasbaya aqbalidda Guudlaawe | KEYDMEDIA ONLINE
Dabageed oo beeshiisa ku qasbaya aqbalidda Guudlaawe
Madaxwayne ku xigeenka Maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Xagar (Dabageed) oo la rumeysan yahay inuu ku daaban yahay Madaxtooyada Soomaaliya, ayaa fariin adag u diray beesha uu ka soo jeedo ee deggan Hiiraan.
BALADWEYNE, Soomaaliya - Madaxwayne ku xigeenka Maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Xagar (Dabageed) ayaa sheegay in Madaxwaynaha maamulkaas Cali Guudlaawe oo loo diido imaashaha Beledwayne ay keenayso in aan doorasho lagu qaban xarunta gobolka Hiiraan.
Dabageed ayaa xusay in reer Hiiraan ay doonayaan in doorashada Xildhibaanada Fedraalka qaybta ay ku leeyihiin lagu qabto Beledwayne, sidoo kalena ay rabaan in Madaxwaynaha Maamulka Hirshabeelle uusan imaan magaalada, taas oo uu ku tilmaamay laba arrin oo aan is qaban.
“Waxay halkaan doorashadu ku imaan weyn kartaa in Madaxweyne Cali Guudlaawe loo diido inuu yimaado dBeledweyne, haddii madaxweynuhu halkaan imaan waayo doorashadu ma imaan karto, horayna waan u sheegay, haddana waan ku celinaa, hadii magaaladan ay nabad geliyo noqon weyso doorasho laguma qaban karo,” ayuu yiri Dabageed.
Wuxuu carrabka ku adkeeyay in waddada kaliya ee Beledwayne doorasho uga dhici karto ay tahay nin Cali Guudlaawe uu tago magaalada, ka hor inta uusan Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Xilgaarsiinta u socdaalin, si uu u arko goobaha ay doorashadu ka dhacayso.
Beesha uu ka soo jeedo Madaxwayna ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed, ayaa si wayn uga soo horjeedda Maamulka uu madaxwaynaha ka yahay Cali Guudlaawe, taas baddelkeenada waxa ay taageero u fidiyeen Jamhadda uu hoggaamiyo Janaral Xuud.